Betsaka ireo fitakian’ny Sempama mba hanatsarana ny fanabeazana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Betsaka ireo fitakian’ny Sempama mba hanatsarana ny fanabeazana
Rasolonjatovo Willy il y a 1 moi
Niresaka tamin’ny mpanao gazety ny Sempama Sendikan’ny mpampianatra mpanabe ny 21 septambra teny Mahamasina. Nambaran’izy ireo ny zavatra maro tsy mety ao amin’ny minisitera sy amin’ny sekolim-panjakana.
Manoloana ny kabarin’ny Filoham-pirenena ny 15 aogositra 2021 tamin’ny fanendrena ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny Governemanta no nanamafisany ny « obligation de résultats » sy « zéro échec » eo amin’ny fanatanterahana ny vina
Noho ny fanakorontanana ataon’ireo tsy maty manota sy tsy maty voalavo an-kibo ka mihevitra ny hamingana ny minisitra vaovao eo anivon’ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arak’asa.
Ny Sempama dia manambara fa:
Tsy ekena ny fanaovana tsindry hazolena sy ramatahora ary ny fampihorohoroana amin’ny alalan’ny famindran-toerana tsy manara-dalana “affectation abusive” ny mpiasa rehetra mpisehatra eo anivon’ny ministera sy ny ireo mpampianatra sy mpandraharaha eny amin’ireny Sekoly Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arak’asa ireny.
Tsy ekena ny fanamparam-pahefana sy herisetra (fanaovana amboletra sy famakiana birao) izay nampiharina tamin’ny lehiben’ny sampandraharaha na “chef de service” tamin’ny fihetsika tsy mendrika ny maha mpanabe.
Mitaky ny fampiharana ny fanajana ny lalana amin’ny alalan’ny “Appel à candidature national” ho an’izay lehiben’ny sampandraharaha “chef de service” hotendrena eo anivon’ny Ministera.
Hita fa nisy hosoka betsaka ny lisitra izay navoakan’ny Ministera mikasika ny fandraisana ireo mpiasam-panjakana tamin’ny volana aprily sy ny fandraisana Ecd izay navadika ho Eld farany teo. Ka noho izany, dia tsy ekena ary lavinay marindrano ny fomba fampidirana ho mpiasam-panjakana izay no tanterahin’ny ministra teo aloha sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy izay tsy manaraka ny lalana manan-kery.
Mitaky izahay ny fanesorana tsy misy hatakandro ireo olona tompon’andraikitry ny ministera voatendry ny Ministra teo aloha fa tena miharihary ny tsy fahombiazan’izy ireo ary miteraka fanakorontanana sy famotehana ny Ministera indrindra fa amin’izao ankatoky ny fidiran’ny mpianatra izao;
Takianay ihany koa ny hanaovana fitsirihana na « inspection » ny momba ireo recrutement na fampidirana mpiasam-panjakana sy ny famadihana ny « ECD »ho « ELD » « basculement ECD-ELD » ary ny fandaniam-bolan’ny Minisiteran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arak ‘asa;
Takianay ny famerenana ireo “ECD” noroahina nefa manana decision ara-dalana.
Takiana ny fanafoanana ireo naoty famindrana toerana ny mpampianatra sy ny mpiasa noho ny antsonjay.
Takiana ny fandoavana ny karaman’ny “ECD” sy “vacataire” hatramin’ny volana desambra 2020 ka hatramin’ny andro niasany.
Atao izao fanambarana izao ho fanarenana ny Ministera sy ho fanatsarana ny fomba fitantanan-draharaha ary hisorohana ny fikorontanana mety hisy eo anivon’ny Sekoly Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arak’ asa
Marihina fa ny Sekretera Jeneraly dia olona mpahay lalana “magistrat administratif” kanefa dia zavatra petatoko sy kitoatoa toy izao no asehony masoandro eto anivon’ny ministeran’ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa; mahatsiaro menatra sy afa-baraka izahay manoloana izany.
Mitaky izahay mba ho olona teknisiana mahafehy tsara ny asa eo anivon’ny Minisitera no tendrena eo amin’ireo ambaratongam-pahefana sy fitantanana rehetra isan’ambaratongany.
Anananay porofo sy taratasy mazava izay voalaza rehetra etsy ambony ireo.
Manahy mantsy izahay sao dia mba ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arak’asa no tadiavin’ny sasany ho sehatra hilalaovana politika ka tsy hahazoan’Atoa Filoham-pirenena manatanteraka ny velirano sy ny fanamby nataony hoan’ny firenena.